IMicrobiology yoMfanekiso wokuQokelelwa kunye neFactory yeziSombululo zezoThutho-i-China Microbiology yoMfanekiso wokuqokelelwa kunye neZisombululo zoThutho abavelisi, ababoneleli
I-Oral Swab (Kit) - Qokelela iisampulu zebhayoloji ezifana neeseli ezikhutshiweyo kunye neentsholongwane eziphuma emlonyeni womlomo wenkcubeko yeseli, ukufunyanwa kweDNA / RNA, njl.
I-Nasopharyngeal, i-Throat Swab (Kit) - Qokelela iisampuli zentsholongwane kwi-nasopharyngeal yabantu kunye ne-respiratory tract, ngenxa ye-influenza, i-HFMD kunye nezinye izifo zentsholongwane yokuphefumula.
Umlomo wesibeleko, i-Urethral Swab (Kit) - Qokelela iiseli ezikhutshiweyo kunye neesampuli zemfihlo ezivela kumlomo wesibeleko womntu, i-vagina kunye ne-urethra, ukwenzela ukuhlolwa kwe-TCT kunye ne-HPV kwiklinikhi ye-gynecology kunye neziko lovavanyo lomzimba.
I-Fecal Swab (Kit) - Ukuqokelela iisampulu ze-fecal, kwizifo ezithathelwanayo zamathumbu emathunjini, izifo ze-digestive tract parasitic, izicubu ezinobungozi, izifo ze-pancreatic kunye ne-hepatobiliary system, njl.
I-Saliva Collection Kit - Qokelela iiseli ze-salivary ze-mucosa yomlomo kwi-DNA / RNA extraction.
I-Swab yeSampuli yoMlomo/yoMqala TFS-TF(1506-2LMZ22ZR)/TFS-TG(15048HMZ22ZR)
Mfutshane Oral Swab TFS-TE(1003LMZ22ZR)
Umqala iSampulu Swab TFS-TD(1508LMZ22ZR)
Umqala iSampulu Swab TFS-TD(1508LMZ22ZR)/TFS-TD(1508LMZZGZR)
Umlomo / ngeempumlo Rayon Swab TFS-TD(1508LMZ16RZS)
I-Oropharyngeal Swab TFS-TC(1503LMZ22ZR)
I-Swab yoMlomo TFS-TC(1403LMZ10ZR)
Ukuswabha ngeempumlo I-NFS-TB(150X48MMZ20ZR)
I-Male Urinary Sampling Swab UFS-TA(100X35HMZ22ZR)
123456 Okulandelayo > >> Iphepha 1/6
Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Buccal Swab Collection Kit, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml,